सीईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, कतिले पाउनेछन् सेयर ? - जन आवाज
सीईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड भोलि, कतिले पाउनेछन् सेयर ?
सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड भोलि शुक्रबार हुने भएको छ। सीईडीबी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले भोलि बिहान ११ बजे गर्नेछ। आईपीओ बाँडफाँड कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ।
यो कम्पनीको आईपीओ गत वैशाख १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म बिक्री गरिएको थियो। कम्पनीले कुल १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल २५ लाख २८ हजार २३० कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने ५० हजार ३६५ कित्ता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख २५ हजार ९११ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ। बाँकी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिएका छन्।
यो आईपीमा कुल २ करोड ४७ लाख ७ हजार १०७ कित्ताका लागि आवेदन परेको छ। जुन मागभन्दा १०.५२ गुणा बढी हो। कुल परेको आवेदनमध्ये १६ लाख ८५ हजार ६२७ आवेदकबाट परेको २ करोड ४६ लाख ४५ हजार ७३५ कित्ता प्रमाणीकरण भएको छ। तीमध्ये ४ हजार ४४२ आवेदकबाट माग भएको ६१ हजार ३७२ कित्ता अयोग्य भएको क्यापिटले जनाएको छ।
त्यस्तै ४८ हजार ३२२ आवेदकबाट परेको १६ लाख ३७ हजार ६५९ प्रमाणीकरण हुन नसकेको क्यापिटलले जनाएको छ। यो हिसाबले यो आईपीओ पनि गोलाप्रथाबाटै वितरण हुनेछ। जसमध्ये २ लाख ३४ हजार १९५ आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाउने छन् भने बाँकीको हात खाली हुने भएको छ।